HORONANTSARY: Hanenika an’i Amerika Latina ve ny “onja maitson’ny” zo hanala zaza any Arzantina ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2021 14:51 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, русский, English
Niteraka resabe momba ny zo ara-pananahana manerana an'i Amerika Latina ny fanaovana ho ara-dalàna ny fanalan-jaza nanan-tantara tany Arzantina tamin'ny volana Desambra 2020. Hanenika iny faritra iny ve ny “onja maitso” any Arzantina, ary hitondra fanovana araka ny lalàna sy fihetsika manoloana ny fanalan-jaza ve izany?
Tamin'ny 9 Martsa no nandeha mivantana ity dinidinika mafana niresahana momba ity lohahevitra ity tamin'ny teny espaniola ary ilay toniandahatsoratra ao amin'ny Global Voices Amerika Latina Melissa Vida no nandrindra izany ka ireto avy no nandray anjara:
Anette Eklund, mpandika teny sady mpanangana votoaty, mpanao gazety, mpampianatra, mpikatroka ary mpisolo vava ho an'ny demokrasian'ny fiteny sy ny zon'olombelona; mpandray anjara ato amin'ny Global Voices ihany koa .
Gabriela Mesones Rojo, mpanao gazety Venezoeliana manampahaizana manokana momba ny miralenta sy ny zon'olombelona, ​​mpandrindra ny famoahan-dahatsoratra ao amin'ny Caracas Chronicles sy Cinco8; mpandray anjara sady mpikaroka ao amin'ny Civic Media Observatory an'ny Global Voices ihany koa.